Musharaxiinta Jubbaland oo Baarlamaanka ka Horjeediyey Khudbadahooda Musharaxnimo[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Musharaxiinta Jubbaland oo Baarlamaanka ka Horjeediyey Khudbadahooda Musharaxnimo[Sawirro]
Illaa Afar musharrax ayaa u taagan qabashada xilkani, waxaana maalinta berrito ah lagu wadaa in doorashada ay ka dhacdo magaalada Kismaayo, inkastoo baarlamaanka dowladda iyo siyaasiyiin kale ay qaadaceen.
Madaxweynaha Xilligaan ee maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe kana mid ah Musharraxiinta ayaa khudbadii uu jeedinayay waxa uu kusoo hadal qaaday arrimo oo ku saabsan waxyaabaha uu hiigsanayo hadii uu doorashadaasi ku guuleysto.
Sidoo kale Axmed Madoobe ayaa sheegay in mudadii Labada Sano ahayd ee xilkaasi uu hayay uu qabtay shaqooyin badan, islamarkaana ay u harsan yihiin howlo kale oo dhameystir uga baahan.
Musharrax Hilowle Aadan oo isna markii Labaad xilkaan u tartamaya ayaa waxa uu halkaasi ka sheegay in hadii uu guuleysto uu ballan qaadayo in horumaro badan gaarsiiyo gobalada Jubbaland, sidoo kalena uu dhisayo ciidan awood badan leh oo maamulkaasi u gaar ah.
Cismaan Xaaji Fayruus oo ah musharraxa Sedaxaad ee xilka madaxweynaha Jubbaland u taagan ayaa dhankiisa ka dalbaday baarlamaanka Jubbaland in codka ay siiyaan, si uu isbedal la taaban karo ugu keeno gobalada Jubbaland.
Ugu dambeyn Musharrax Maxamed Cismaan Yuusuf ayaa isna dhankiisa waxa uu ku dheeraaday ka hadlay waxyaabaha ugu mihiimsan ee xilligaan uu qaban doono, waxaana hoosta uu ka xariiqay in dhaqaalaha Jubbaland uu waxbadan kusoo kordhin doono.
Maalinta berri ah, kuna beegan 15-ka August ayaa lagu wadaa in doorashada madaxweynaha Jubbaland ay ka dhacdo magaalada Kismaayo, halkaasi oo mas’uuliyiin iyo siyaasiyiin badan ku sugan yihiin.